IZINDABA EZINTSHA: UMartin Vrijland
Usongo lwenuzikliya eNyakatho Korea ngokusongelwa okukhulu kwesintu
ahanjiswe IZINDABA EZINTSHA	by UMartin Vrijland	ku-11 May 2017	• 29 Amazwana
Emasontweni ambalwa adlule, izindaba ngaphezu kwekhetho laseFrance ligxile ekusongweni kwempi yase-US ngokumelene neNyakatho Korea. Lokho lizwe ngokuzumayo kakhulu kuyingozi ngoba singakhukhuleka uma abasebenza ukwakhiwa kwezikhali zenuzi nokuthi kuyinto engathandeki uma ebizwa Melika, kodwa izaba ezinhle ubuyele [...]
Awudingi ukuphikisa uhlelo, kodwa kufanele ufeze impumelelo ngaphakathi kwalo
ahanjiswe IZINDABA EZINTSHA	by UMartin Vrijland	ku-2 May 2016	• 1 Comment
Abantu abaningi bacabanga ukuthi akufanele uphikise "uhlelo", kodwa kufanele uthole izindlela zokuphumelela. Njengamanje, ungathola izindlela zokuthola imali kulelo hlelo noma ngaphakathi kwalesi simiso ngaphakathi kwamanje. Nakuba kunjalo kuyiqiniso ukuthi uma ucindezela ukuphefumula, lokhu [...]
Yini engalungile ngomqondo wombuso wezwe ophakathi?
ahanjiswe IZINDABA EZINTSHA	by UMartin Vrijland	ngo-16 March 2016	• 16 Amazwana
Umbuzo engivame ukuwuthola uwukuthi: "Yini engalungile uhulumeni womhlaba ophakathi?" Ngezinye izikhathi kukhona okunye okungeziwe: "Kukhona nabantu abaningi abalula abadingayo isiqondiso futhi kusasebenza uma ukhona emhlabeni wonke unemithetho efanayo? "Imibuzo ngokuyinhloko, ungathi. Lokho [...]
Ukudla kwe-Nano-tech kanye nokuseshwa kwe-Google kokungafi
ahanjiswe IZINDABA EZINTSHA	by UMartin Vrijland	ngo-27 February 2016	• 12 Amazwana
I-Google iqashe i-geneticist ephezulu ekusesheni kwakhe kokungafi. I-Google igcwele 'ibalazwe lomgwaqo' njengoba livame ukuchazwa yi-transhumanist uRay Kurzweil owafaka igama elithi 'ubuningi' futhi uthi abantu e-2045 bafinyelela ekungafi. Ngaphambilini ngabika ukuthi bathole ukuthi ikhodi ye-DNA ingabuyekwa kabusha [...]
I-'lit-slit experiment 'mayelana nokukhohlisa kweqiniso
ahanjiswe IZINDABA EZINTSHA	by UMartin Vrijland	ngo-24 February 2016	• 20 Amazwana
Konke okuzungezile, ngisho nomzimba wakho siqu, kudalwa kuphela uma uyibona. Lokho isitatimende esinesibindi. Noma kunjalo, lesi sitatimende sisekelwa yizinto ezitholwa yisayensi emkhakheni we-physics ye-quantum. Izazi ze-physum ze-Quantum emhlabeni wonke ziye zaphindaphinda izivivinyo ezilandelayo izikhathi ezingamakhulu, ngoba zaholela ekungakholweni okukhulu futhi ngasikhathi esifanayo isimangalisa kakhulu. [...]
I-matrix ayibalulekile, konke kwenzeka endaweni 'engqondweni'
ahanjiswe IZINDABA EZINTSHA	by UMartin Vrijland	ngo-22 Julayi 2015	• 8 Amazwana
'I-matrix ayibalulekile, konke kwenzeka engqondweni', yisitatimende engikuzwile kuleli sonto futhi ngokuqinisekile ngicabanga ukuthi kufanelekile. Ukukhuluma nge-matrix nokubunjwa kwayo akubaluleke kakhulu; ukucabanga ngesakhiwo samandla emhlabeni akubalulekile; zonke izinhlobo zesipiliyoni zenzeka [...]
Ukusebenzisana phakathi komuntu nomsuka wayo
ahanjiswe IZINDABA EZINTSHA	by UMartin Vrijland	ngo-12 Juni 2015	• 19 Amazwana
Nakuba abantu ngesisekelo sezincazelo zami mayelana ne-quantum physics kanye ne-'Test Double Slit Test '(bheka lapha) bangase bafinyelele esiphethweni sokuthi nginombono wokubheka ngokuphila, lapho konke kuwukuphela kokubona nokuthi lowo muntu uyakwazi kuphela ukuthola "ngokoqobo" njengehlobo lehologram kuya project, ukuthi [...]
ahanjiswe IZINDABA EZINTSHA	by UMartin Vrijland	ngo-23 April 2015	• 46 Amazwana
Ngezinkolo eziningi, kukhulunywa ngezinye izikhathi 'umoya, umphefumulo nomzimba'. Ngakho-ke abantu abaningi baye bakuzwa ngale migomo, kodwa cishe kunzima ukuchaza okubili kokubili, kanti sonke siyazi ukuthi umzimba ungubani. Mina ngokwami ​​ngichaze umzimba wethu njenge-bio-computer futhi [...]
Konke ngaphansi kwelanga kusendaweni
ahanjiswe IZINDABA EZINTSHA	by UMartin Vrijland	ngo-16 April 2015	• 9 Amazwana
'Konke okungaphansi kwelanga kuphelile'; yilokho i-band Pink Floyd ihlabelela ingoma yabo 'Eclipse'. Konke ngaphansi kwelanga 'kuhamba'. Babezosho ukuthini ngalokho? Nginikeza isihloko kuso ngaphambi (bheka lapha), kodwa waphefumulelwa namuhla ukuba ubuyele kuso. Uma konke [...]
Uqhaqhawula kanjani kusuka kumatrix futhi usaphila ngaphakathi kuwo?
ahanjiswe IZINDABA EZINTSHA	by UMartin Vrijland	ngo-16 April 2015	• 4 Amazwana
Ngo-September 2014 ngathola - ngokwezihloko zami mayelana ne-matrix - izikhathi eziningana umbuzo othi: "Ngizihlukanisa kanjani nomthamo futhi ngisaphila ngaphakathi komthamo?" Ngokwesibonelo, kwakukhona umuntu umbuzo wabuza [isiqephu] Ngisithakazelo isikhathi esithile [...]
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.360.699
I-Riffian op Indlela ephumelela kunazo zonke yokulwa ne-coronavirus ivela eChina (ividiyo)
Ikusasa op ICoronavirus: avelaphi amagciwane futhi aphindeka kanjani futhi ahamba kanjani?
Abderrazak Samir op ICoronavirus: avelaphi amagciwane futhi aphindeka kanjani futhi ahamba kanjani?